Peace Caravan iyo Kadam Pa Kadam (KPK, talaabo talaabo ah) barnaamij raadiye - Equal Access International
Way fududahay in la riyoodo, laakiin ma sahlana in loo halgamo nabadda…
- Dhageyste KPK, Touqueer, Pakistan
Gobalada Qabaa'illada Fedaraalka ee loo Maamulay (FATA) iyo Khyber Pakhtunkhwa (KP) ee Pakistan ayaa ah kuwa ugu halista badan dalka. Dumar badan iyo gabdhoba waxaa loola dhaqmaa sidii muwaadiniin dabaqadda labaad ah, oo badanaa aan awoodin inay aadaan dugsiga ama ka qeybqaataan go'aan qaadashada. Iyada oo taageero laga helayo Qeybta Arimaha Bulshada (PAS) ee qunsulka Mareykanka ee Peshawar, iyada oo loo marayo Talaabo talaabo barnaamijka (Kadam Pa Kadam), EAI waxay keentay muusikada, tiyaatarka, raadiyaha, isboortiga, iyo wadahadalka dadweynaha gobolka iyadoo ujeedadu tahay barashada nabadda iyo xuquuqda loo siman yahay iyadoo loo marayo bulshada iyo farshaxanka. Iyadoo raadiyaha uu yahay habka ugu fudud ee lagu gaari karo dhagaystayaasha Pakistan, sanadihii 2013 iyo 2014, EAI waxay biloowday barnaamij waxbarasho, iyadoo adeegsaneysa idaacadaha si loogu faafiyo aqoonta xuquuqda haweenka iyo nabad dhisida meelaha ay ku hanjabeen kooxaha xagjirka ah ee rabshadaha wata (VE). Intaa waxaa dheer, ka Nabadoon Caydiid qaybta mashruucu wuxuu masraxa iyo waxqabadka muusigaba u keenay tuulooyinka dhamaan FATA iyo KP ee Baakistaan.
Sida laga soo xigtay PCNA, dariiqa looga hortagayo xagjirnimada ee FATA iyo KP waxay ku bilaabmaysaa wadaagista qiyamka iyada oo loo marayo waxbarashada laguna dhiirigelinayo muwaadiniinta in ay yeeshaan aragtiyo kale. Inta lagu gudajiray hirgelinta Talaabo talaabo iyo Nabadoon Caydiid, EAI waxay ku dooday qaabkan, awood u siinta muwaadiniinta saboolka ah ee Pakistan sharaf iyo xushmeyn iyadoo la soosaarayo barnaamijyo raadiyo ah oo qaab u yeelista bini-aadamnimada iyo kala-jaheynta bulshada ee ku wajahan dacaayadaha xagjirka ah, iyo qabashada riwaayadaha mobilada, iyagoo adeegsanaya fanka si loo baro nabadda.
Bandhigyada si heersare ah loo aasaasay ee EAI, oo ay ka mid yihiin in ka badan 1,000 qaybood oo telefishan ah ayaa si joogto ah u gaadhay dhagaystayaasha FATA iyo kuwa KP ee aan mudnayn. Tan iyo bilowgii mashruuca. Talaabo talaabo lasiiyay gaadiid loogu talagalay waxbarashada madaniga ah iyo wacyi gelinta bulshada ee qeybaha ugu badan ee la takooriyay ee FATA iyo KP. Mashruucu wuxuu taageeray dhagaystayaasha inay ka jawaabaan fikradaha xag-jirnimada, iyadoo la kobcinayo qaabab aan rabshado u xallin khilaafaadka. Mashruucu wuxuu noqday meel ku habboon oo lagu horumariyo nabadda iyo waxbarashada gabdhaha ee aagagga FATA iyo KP.
Farshaxanka mobilada: Guud ahaan 40 riwaayado mobiladeed ayaa si guul leh loogu soo diyaariyay FATA iyo KP oo ujeeddooyinkooduna yihiin dhiirrigelinta nabadda iyo dhiirrigelinta isbedelka dabeecadda ee ku saabsan xuquuqda haweenka ay u leeyihiin waxbarashada iyo in ay taageeraan haweenka inay noqdaan kuwo ku dayasho wanaagsan bulshada dhexdeeda.
Barnaamijyada Raadiyaha: Riwaayadaha raadiyaha iyo barnaamijyada fanka ayaa kaqeyb galaya dhagaystayaasha FATA iyo KP. Tababar ayaa loo qabtay wariyeyaasha bulshada (20 dheddig iyo 20 rag ah) si ay warbixinno uga bixiyaan bandhigyada raadiyaha. Shaqaalaha Idaacada waxay wareysteen ku dhawaad ​​3,000 oo marti ah iyo khubaro matalaya Dowlada Pakistan, ururada samafalka ah, kooxaha haweenka, iyo ururada xirfadleyda ah.
Naadiyada Dhageysiga: Isticmaalka Talaabo talaabo barnaamijka raadiyaha (KPK) ayada oo aasaaska u ah Naadiyada Dhageysigu inay isugu yimaadaan, naadiyadan waxay bixiyeen fursad ay ku wadaagaan aqoonta oo ku saabsan mowduucyada muhiimka ah iyo farriimaha laga wada hadlay kulan kasta, iyagoo bixinaya qaabab wax ku ool ah oo ku habboon nolosha dhabta ah ee xubnaha.
Hujra: Kooxda maxalliga ah ee EAI waxay ka hirgalisay 20 Xullo-wacyigelin xarumaha bulshada ee kala duwan in kabadan 20 tuulo oo ku baahsan FATA iyo KP, iyada oo ujeedada ugu weyn ee kor u qaadida wadahadalka looga hadlayo nabada, abaabulida jaaliyadaha, iyo horumarinta isafgarad si loo raadiyo xalin aan rabshado lahayn oo khilaafaadka ah, kuna saleysan dhaqanka ee Hujra.
Riwaayadaha Nabadda: Kooxda EAI waxay qabteen 20 Riwaayado Muusik Nabadeed oo ka badan 20 tuulo oo ku yaal FATA iyo KP iyada oo ujeeddada ugu weyn ee ay u leedahay kor u qaadidda nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada ee maxalliga ah loo maro dhaqanka dhaqameed ee Pukhtoon.
Cayaaraha: EAI waxay abaabushay 20 tartamo isboorti in kabadan 20 tuulo oo FATA iyo KP ah, abuuraya fursado waxbarasho iyo madadaalo dhalinta Bakistaan.
Tababaridda NGO-yada: Saddex urur oo ah koox-hoosaadyo ayaa tababar ka helay EAI oo isku dubbariday hawlihii "Peace Caravan", oo ay ku jiraan riwaayadihii mobilada, tartamada isboorti, riwaayado muusig, iyo Hujra Gatherings.
"Waxaan aad u jecelnahay barnaamijkaaga, gaar ahaan hooyaday waa ay jeceshahay. Labadeenaba waxaan nahay dhageysteyaal caadi ah. Markii aan dhageysanayno, waxaan ku riyooneynaa sida ay noqon karto Pakistan."
Ka qeyb galayaasha riwaayadaha Nabadda
Dhallinyardu waxay ka soo qayb galeen 40 tiyaatarro riwaayado ah oo ka badan 20 tuulo oo kala duwan
Xubnaha bulshada Peshawar waxay ku heshiiyeen sida ugu wanaagsan ee lagu joojiyo xagjirnimada rabshadaha ah waa wada hadalka qoyska iyo bulshada.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee mashruuca wuxuu ahaa barnaamijka raadiyaha, Talaabo talaabo, oo laga sii daayay Radio Pakistan Peshawar, oo gaarey ilaa 3 milyan oo dhagaystayaasha FATA, KP, iyo Afghanistan.
Mid ka mid ah guulaha la taaban karo ee kooxdeena maxalliga ah ee EAI ayaa ah ballanqaad iyo dhiirranaan ay u hayeen abaabulidda iyo hirgelinta masraxa guur-guura ee lala beegsanayo kaqeybgalayaasha haweenka ee Hay'adda Bajaur oo ah mid ka mid ah meelaha ugu nabadgelyo darran dalka, kuwaas oo had iyo jeer la kulma weerarada xagjiriinta.
Ka taageer EAI sidii loo horumarin lahaa habab hal abuur leh oo lagu dhisayo nabada iyo horumarka hogaaminta ee dhalinyarada iyo haweenka.